Fiarovana ny Spam: Torolàlana avy amin'ny Semalt
Ny ankamaroan'ny mailaka dia manana hafatra amin'ny spam ao amin'ny lahatahiry misy azy. Ny fahasamihafana ny mailaka mailaka avy amin'ireo loharanom-baovao azo antoka dia zava-dehibe ho an'ny mpampiasa rehetra.
Ny mailaka amin'ny spam dia mety ahitana tran'ny serasera na fikasana hanao hetsika hafa, izay mamitaka ny niharan'ny asa fanodikodinam-panafody. Ireo mpitsoa-ponenana dia mahazo fidirana amin'ny solosainao ary mandefa mailaka misy dokam-barotra izay tsy tianao - pc xperts solution ltd. Amin'ny toe-javatra sasany, ny solontenan'ny spam dia mahomby amin'ny fampidirana ny rafi-tambajotra amin'ny ordinatera. Ity vokatra ity dia afaka manome azy ireo ny fidirana amin'ny mailaka azo itokisana, izay ahafahan'izy ireo mampiditra azy ho olona ara-drariny. Amin'ny tranga hafa dia afaka mandefa votoaty tsy mifanentana amin'ny ankizy ny spam, anisan'izany ny pôrnôgrafia.
Ny miala amin'ny spam dia tsy maintsy ho an'ny olona iray miasa amin'ny aterineto. Mba hisorohana na hanesorana spam, i Lisa Mitchell, manam-pahaizana avy amin'ny Semalt , dia manoro hevitra anao ireto fepetra manaraka ireto.
1. Mampiasà rindrambaiko fanivanana spam
Misy vahaolana vahaolana amin'ny rindrambaiko manohitra ny spam, izay manohana ny fanakànana votoaty avy amin'ny mpampiasa tsy fantatra. Ireo sivana dia mijery sy mamantatra ireo hafatra tonga. Ny rindrambaiko dia afaka manakana ny mailaka, izay ahitana spam ary mamela ireo olona ara-dalàna. Ny fampidirana ireny rindrambaiko blocs ireny dia mety hisy vokany mahasoa eo amin'ny fahamarinan'ny tranonkalanao ary koa ny fanatsarana ny sasany amin'ny ezaka SEO anao.
2. Manaova adiresy mailaka iray
Ho an'ny olona manana mailaka na mailaka amin'ny blôgy, dia ilaina ny mampiasa mailaka maimaim-poana..Ny mpisambotra dia afaka manaisotra tambajotra iray ary mandefa ny mailaka ao amin'ny tranonkala iray. Amin'ity tranga ity dia afaka mandefa ny hafatra izay misy spam emails izay tsy misy fiantraikany amin'ny fampahalalam-baovao. Mampiasa taktika toy ny fampiantranoana, dokam-barotra ary fialam-boly ny spam mba hahafahan'ilay olona niharam-pahavoazana.
3. Aza tsindrio ny rohy amin'ny spam email
Ireo rohy ireo dia mety manatanteraka asa mahatsikaiky toy ny SQL entrée na manaisotra ny navigateur ho an'ireo hack malgache. Amin'ny toe-javatra hafa, ireo rohy ireo dia afaka miantso ny code amin'ny smartphones manao azy ireo manao asa toy ny resadresaka fametrahana.
4. Mametra ny fitaovana SEO azo itokisana sy miahiahy
Amin'ny alàlan'ny tsenan'ny aterineto, ny spammers dia mahomby amin'ny teknolojia SEO sy fitaovana maro. Manana fahombiazana izy ireo amin'ny fanodinana ny ankamaroan'ny tranga misy azy, toy ny fomba fanao ara-barotra amin'ny aterineto. Ireo spammanana dia manana fitaovana maoderina izay afaka manampy azy ireo hamerina adiresy mailaka valo an'arivony.
5. Aza manokatra ny fandefasana mailaka
Ny iray amin'ireo fomba mora indrindra ahafahana mahazo fanafihana avy amin'ny Trojans dia ny hanokatra fanangonana izay ahitana trojan. Ireo dia fitaovan'ny hacker izay manana asa manokana ataon'izy ireo amin'ny solosaina iray. Ny fomba iray iraisana ampiasain'ny spammers dia mandefa lisitra, katalaogy na fampahafantarana karatra amin'ny endriky ny antontan-taratasy ao amin'ny mail.
Ny olona tsirairay, izay mampiasa ny PC na finday mba hiditra amin'ny aterineto, dia lohahevitra momba ny spam. Ireo mailaka amin'ny spam dia avy amin'ny hackers misy fikasana ratsy maloto amin'ny tanjony. Miankina amin'ny vulnerabilita sy ny tsy firaharahiana ilay niharam-boina, dia afaka manangona ny birao manontolo ny mailaka. Azon'izy ireo atao ny manakiana ny fomba fiasan'ny tranonkala sy ny mangalatra amin'ny mpampiasa. Tena ilaina ny miala amin'ny spam. Tsy vitan'ny hoe mampijaly ny orinasa iray ny spam, fa mitondra tranokala ihany koa. Afaka misoroka ny fanafihana spam amin'ny fampiasana ireo toro lalana ireo ianao. Amin'ny toe-javatra hafa dia azonao atao ny mamantatra ny mailaka maloto ary misoroka izany, ka mahatonga ny spammer hijanona amin'ny mailakao.